OPDOn hin’sobdi wa’ee Gadaa Busi kana: Gadaa bus= Selam bus!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOPDOn hin’sobdi wa’ee Gadaa Busi kana: Gadaa bus= Selam bus!!
OPDOn hin’sobdi wa’ee Gadaa Busi kana. Kuni beekama dha . Kanan waale qabatee kanan duraa wa’ee Alaba ABOfi basaastu wayanee xiyeefta turtee garu dhugaa miti filmi ojatii akuma wayanen gorsa keenyitef.
Kuni an-humamee waan Oromo itiin gowomsufi Qabsoo Oromo laafisu dhafi maale an birratif miti kuni rajjiidha. Maalif yeroo amma dhufee laata kuni filmi dha. Qabsoo Oromo cimme osoo dhufee jiruu kana dhamsuu dhafi wayanen kuno humna cimma godhatee deebitee jirti . Maalif warana Somalee liyu polisii dhabu dadhabaan laata ? Kuni an nama gadhisisu dha.
Qeerroo n kara hundatiin damaaquu qaba kuni waan nudubati nu-deebissuu injiru, bilisumaa keenyaa OPDO n dubati deebissu dhaf tatafacha irraa akka jirtus beeknaa kuni tokkolee hin-taa’u
Kana beeka. OPDO n dubii waalin laqxee jirti offegaa dhiiroo. Osoo humna qabatee Dr Marara Bekele Gerbee oromo mana hidhatii dararama jirru kana bafti turte. Kuni an nama dhibuu dha . Oromon yeroo Amma Gadaa busi miti an barbadhu ho’taaee lee . Kanuma .
Via: Biqilaa Biyyaa
STN Somali TV was live: ODUU MIRGA- BITAA
Jijjirama OPDO’n amma fidaan jira jettu of eeggannoon ilaaluu barabaachisa. Gaaffii gurguddaas dhiheessuun qoruu barbaachisa.
1. Namoota mootummaan giddu galeessaa oromiyaa keessaa butu hiiksisuu/lakkisissuu
2. Hidhamtoota siyaasaa lakkisiisuu
3. Waraana biyyatti keessatti qixa jaraatti aangoo ajajaa qabaachuu
4. Bizinesii jaraa malaan maltummaan oromiyaa keessaa qaban warasuu/confiscate/